October 2016 | Language Century Language Century
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(97) 百
2:39 AM C-Draw , Chinese
“တစ်ရာ” ကို တရုတ်လို 百 လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဒီတရုတ်စာလုံးရဲ့ စုတ်ချက်ဆွဲနည်း အဆင့်ဆင့်နဲ့ ဆက်စပ်ဝေါဟာရများကို ဆက်လက်လေ့လာကြပါစို့။
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(96) 人
2:34 AM C-Draw , Chinese
“လူ” ကို တရုတ်လို 人 လို့ ခေါ်ပါတယ်။ တရုတ်ဘာသာမှာ အများဆုံး တွေ့ရလေ့ရှိတဲ့ ဝေါဟာရတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ရေးသားရလည်း အလွန် လွယ်ကူပါတယ်။
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(95) 个
2:28 AM C-Draw , Chinese
个 ဆိုတာက မြန်မာလို “တစ်ခု၊ တစ်ယောက်” လို့ အဓိပ္ပာယ်ထွက်ပါတယ်။ တရုတ်ဘာသာစကားမှာ အသုံးအများဆုံး မျိုးပြစကားလုံးတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
5:10 PM E-Songs , English
ဒီသီချင်းလေးကလည်း မြန်မာသံစဉ်တူ ရှိပါတယ်။ ကြာခဲ့ပေမယ့် အရမ်း နားထောင်လို့ကောင်းတဲ့ နာမည်ကြီး တေးသီချင်းတွေပါ။
သီချင်းအမည် - Tieayellow ribbon round the ole oak tree
မြန်မာသံစဉ် - ယုဇနပင်နဲ့ ဖဲကြိုးဝါ (ဇော်ဝင်းထွဋ်)
5:01 PM E-Songs , English
ဒီနေ့အတွက် ခံစားနားဆင်နိုင်စေရန် မြန်မာသံစဉ်တူ အင်္ဂလိပ်သီချင်း အလန်းလေးတစ်ပုဒ် တင်ပေးလိုက်ပါပြီ။ အားလုံးလည်း ကြိုက်ကြမှာပါ။
သီချင်းအမည် - Take me To Your Heart
မြန်မာသံစဉ် - ကြိုးမဲ့စွန် (၀ိုင်ဝိုင်း)
4:45 PM E-Songs , English
အင်္ဂလိပ် သီချင်းကောင်းကောင်းလေးများ ကြိုက်သူတွေအတွက်ပါ။ မြန်မာသံစဉ်တူ အင်္ဂလိပ်သီချင်းလေး တစ်ပုဒ် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
သီချင်းအမည် - Blue Night
မြန်မာသံစဉ် - အပြာရောင် အချစ်ည (မျိုးကြီး)
给力 - မြန်မာလို ဘာအဓိပ္ပာယ်လဲ။
4:54 PM C-Text , Chinese
" ကောင်းတယ် " ဆိုတာကို 好 hǎo အစား 给力 gěilì ကို အစားထိုးပြီး ပြောလို့ရပါတယ်။ သင်ရော 给力 gěilì ကို သုံးတတ်ပါသလား။
“ 这 个 办 法 太 好 了 ” 、“ 你 真 厉 害 ”……
" ဒီနည်းလမ်းက အရမ်း ကောင်းတယ် " ၊ " မင်း တကယ်တော်တယ် " ......
除 了 用 “ 好 ”、“ 厉 害 ”，我 们 还 可 以 用 “ 给 力 ” 来 表 达 一 样 的 意 思 ，所 以 你 可 以 说 “ 这 个 办 法 太 给 力 了 ” 、“ 你 真 给 力 ”……
hao, lihai တွေကို သုံးတာအပြင်၊ အဲဒီလို အဓိပ္ပာယ်မျိုးကို ဖော်ပြဖို့ ကျွန်တော်တို့က geili ကို သုံးနိုင်ပါသေးတယ်၊ ဒါကြောင့်မို့ " ဒီနည်းလမ်းက အရမ်း ကောင်းတယ် " ၊ " မင်း တကယ်တော်တယ် " ...... လို့ သင် ပြောဆိုနိုင်ပါတယ်။
“ 给 力 ” 是 有 帮 助 、给 面 子 、好 的 意 思 。
geili က ကူညီမှု၊ မျက်နှာရမှု၊ ကောင်းမွန်မှု စတဲ့ အဓိပ္ပာယ် ဖြစ်ပါတယ်။
那 没 有 帮 助 、不 好 就 是 “ 不 给 力 啦 ”。
ဒါဆိုရင် မကူညီတာတို့၊ မကောင်းတာတို့ကတော့ bu geili ပဲပေါ့။
“ 给 力 ” 原 来 是 北 方 一 些 地 方 的 方 言 ，后 来 在 网 络 上 流 行 起 来 ，现 在 还 出 现 在 了 词 典 里 。
geili ဆိုတာ အစပိုင်းက မြောက်ပိုင်းဒေသတချို့ရဲ့ ဒေသန္တရစကားပါ၊ နောက်ပိုင်းမှာ အင်တာနက်ပေါ်မှာ ရေပန်းစားလာတာကနေ အခုတော့ အဘိဓာန်ထဲမှာတောင် ဖော်ပြပါရှိနေပြီလေ။
“ 给 力 ” 可 以 用 在 很 多 地 方 。
geili ကို နယ်ပယ်ကဏ္ဍပေါင်းစုံမှာ သုံးနိုင်ပါသေးတယ်။
工 作 上 ，你 可 以 说 “ 我 们 老 板 真 给 力 ，每 个 月 都 给 我 们 发 奖 金 ” ；
အလုပ်မှာဆိုရင် " ငါတို့သူဌေး အရမ်း ကောင်းတယ်၊ လတိုင်း ငါတို့ကို ဘောနပ်စ်ပေးတယ် " လို့ သင် ပြောနိုင်ပါတယ်။
生 活 中 ，你 可 以 说 “ 这 个 网 速 太 不 给 力 了，看 电 视 剧 老 卡 ” ；
နေ့စဉ်လူနေမှုထဲမှာတော့ " ဒီအင်တာနက် မြန်နှုန်းက သိပ်မကောင်းဘူး၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်တာ အဝိုင်းလေးပဲ လည်နေတယ် " လို့ သင် ပြောနိုင်ပါတယ်။
看 球 赛 时 ，大 家 用 得 最 多 的 也 是 “ 给 力 ”，比 如 “ 德 国 太 给 力 了 ” 、“ 这 场 球 不 给 力 啊 ” 等 等 。
ဘောလုံးပွဲ ကြည့်ချိန်မှာ၊ အားလုံးက အများဆုံး သုံးကြတာကလည်း geili ပါပဲ၊ ဥပမာ " ဂျာမဏီက ကောင်းလိုက်တာကွာ " ၊ " ဒီဘောပွဲက မကောင်းပါဘူးကွာ " စသည်ဖြင့်ပေါ့။
你 也 试 着 用 用 “ 给 力 ” 吧 ，别 人 会 觉 得 你 的 中 文 很 给 力 哦 。
သင်လည်း geili ကို စမ်းသုံးကြည့်ပေါ့၊ သင့်ရဲ့ တရုတ်စာ အရမ်း ကောင်းတာပဲလို့ တခြားလူတွေက ထင်သွားလိမ့်မယ်နော်။
1. 这个 〔zhè ge〕ဒါ။ ဒီဟာ
3. 太...了 〔tài...le〕... လွန်းတယ်။ အရမ်း
4. 好 〔hǎo〕 ကောင်းသော
5. 你 〔nǐ〕မင်း။ နင်။ ခင်ဗျား။ သင်
7. 厉害 〔lìhài〕 တော်သော
8. 除了 〔chúle〕... မှလွဲ၍
9. 用 〔yòng〕အသုံးပြုသည်
10. 我们 〔wǒmen〕ငါတို့။ ကျွန်တော်တို့
11. 还 〔hái〕... သေးသည်
12. 可以 〔kěyǐ〕... လို့ရသည်။ နိုင်သည်
13. 给力 〔gěilì〕အလွန်ကောင်းသော
14. 来 〔lái〕လာသည်။ ... မယ်
15. 表达 〔biǎodá〕 ဖော်ပြသည်
16. 一样 〔yíyàng〕တူညီသော
17. 的 〔de〕ရဲ့။ ၏။ သော
18. 意思 〔yìsī〕အဓိပ္ပာယ်
19. 所以 〔suǒyǐ〕ဒါကြောင့်မို့
20. 说 〔shuō〕 ပြောသည်
21. 是 〔shì〕ဟုတ်သည်။ ဖြစ်သည်
22. 有 〔yǒu〕မှာရှိသည်
23. 帮助 〔bāngzhù〕ကူညီသည်
24. 给面子 〔gěi miànzi〕မျက်နှာရသည်
25. 那 〔nà〕ဒါဆိုရင်
26. 没有 〔méiyǒu〕မရှိပါ
27. 不 〔bù〕မ ( အငြင်း )
28. 就 〔jiù〕စကားဆက်
29. 啦 〔la〕ဝါကျနောက်ဆက်ပုဒ်
30. 原来 〔yuánlái〕မူလဖြစ်သော
31. 北方 〔běifāng〕 မြောက်ပိုင်း
32. 一些 〔yìxiē〕တချို့သော
33. 地方 〔dìfāng〕 နေရာ။ ဒေသ
34. 方言 〔fāngyán〕 ဒေသန္တရစကား
35. 后来 〔hòulái〕 နောက်တော့
36. 在 〔zài〕မှာ။ မှာရှိသည်
37. 网络 〔wǎngluò〕အင်တာနက်
38. 上 〔shàng〕အပေါ်
39. 流行 〔liúxíng〕 ရေပန်းစားသည်
40. 起来 〔qǐlái〕( ဖြစ် ) လာသည်
41. 现在 〔xiànzài〕အခု
42. 出现 〔chūxiàn〕 ပေါ်ထွက်လာသည်
43. 了 〔le〕... ပြီးပြီ။ ခဲ့တယ်
44. 词典 〔cídiǎn〕အဘိဓာန်
45. 里 〔lǐ〕အထဲ။ အတွင်း
46. 很多 〔hěnduō〕အများကြီး
47. 工作 〔gōngzuò〕အလုပ်
48. 老板 〔lǎobǎn〕သူဌေး
49. 每个月 〔měige yuè〕လတိုင်း
50. 都 〔dōu〕အားလုံး
51. 给 〔gěi〕 ပေးသည်
52. 发奖金 〔fā jiǎngjīn〕 ဘောနပ်စ်ပေးသည်
53. 生活 〔shēnghuó〕လူနေမှုဘဝ
54. 中 〔zhōng〕အလယ်။ အထဲ
55. 网速 〔wǎngsù〕အင်တာနက် မြန်နှုန်း
56. 太 〔tài〕အရမ်း။ သိပ်
57. 看 〔kàn〕ကြည့်သည်
58. 电视剧 〔diànshìjù〕ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွဲ
59. 老 〔lǎo〕... ချည်းပဲ
60. 卡 〔kǎ〕ရပ်တန့်သည်။ နှေးကွေးသော
61. 球赛 〔qiúsài〕 ဘော်လုံးပွဲ
62. 时 〔shí〕... တဲ့အခါ
63. 大家 〔dàjiā〕အားလုံး
64. 得 〔de〕... တာ
65. 最多 〔zuìduō〕အများဆုံး
66. 也 〔yě〕လည်း။ လည်းပဲ
67. 比如 〔bǐrú〕ဥပမာ
68. 德国 〔Déguó〕ဂျာမဏီ
69. 这场 〔zhè chǎng〕ဒီတစ်ပွဲ
70. 球 〔qiú〕 ဘော်လုံး
71. 啊 〔a〕ဝါကျနောက်ဆက်ပုဒ်
72. 等等 〔děng deng〕စသည်ဖြင့်
73. 试 〔shì〕စမ်းသပ်သည်
74. 吧 〔ba〕ဝါကျနောက်ဆက်ပုဒ်
75. 别人 〔biérén〕တခြားသူ
76. 会 〔huì〕တတ်သည်။ လိမ့်မယ်
77. 觉得 〔juéde〕ခံစားရသည်
78. 中文 〔Zhōngwén〕တရုတ်ဘာသာ
79. 很 〔hěn〕အရမ်း
80. 哦 〔o〕ဝါကျနောက်ဆက်ပုဒ်
给力 - မွနျမာလို ဘာအဓိပ်ပာယျလဲ။
" ကောငျးတယျ " ဆိုတာကို 好 hǎo အစား 给力 gěilì ကို အစားထိုးပွီး ပွောလို့ရပါတယျ။ သငျရော 给力 gěilì ကို သုံးတတျပါသလား။
" ဒီနညျးလမျးက အရမျး ကောငျးတယျ " ၊ " မငျး တကယျတျောတယျ " ......
hao, lihai တှကေို သုံးတာအပွငျ၊ အဲဒီလို အဓိပ်ပာယျမြိုးကို ဖျောပွဖို့ ကြှနျတျောတို့က geili ကို သုံးနိုငျပါသေးတယျ၊ ဒါကွောငျ့မို့ " ဒီနညျးလမျးက အရမျး ကောငျးတယျ " ၊ " မငျး တကယျတျောတယျ " ...... လို့ သငျ ပွောဆိုနိုငျပါတယျ။
geili က ကူညီမှု၊ မကျြနှာရမှု၊ ကောငျးမှနျမှု စတဲ့ အဓိပ်ပာယျ ဖွဈပါတယျ။
ဒါဆိုရငျ မကူညီတာတို့၊ မကောငျးတာတို့ကတော့ bu geili ပဲပေါ့။
geili ဆိုတာ အစပိုငျးက မွောကျပိုငျးဒသေတခြို့ရဲ့ ဒသေန်တရစကားပါ၊ နောကျပိုငျးမှာ အငျတာနကျပျေါမှာ ရပေနျးစားလာတာကနေ အခုတော့ အဘိဓာနျထဲမှာတောငျ ဖျောပွပါရှိနပွေီလေ။
geili ကို နယျပယျကဏ်ဍပေါငျးစုံမှာ သုံးနိုငျပါသေးတယျ။
အလုပျမှာဆိုရငျ " ငါတို့သူဌေး အရမျး ကောငျးတယျ၊ လတိုငျး ငါတို့ကို ဘောနပျဈပေးတယျ " လို့ သငျ ပွောနိုငျပါတယျ။
နစေ့ဉျလူနမှေုထဲမှာတော့ " ဒီအငျတာနကျ မွနျနှုနျးက သိပျမကောငျးဘူး၊ ရုပျရှငျကွညျ့တာ အဝိုငျးလေးပဲ လညျနတေယျ " လို့ သငျ ပွောနိုငျပါတယျ။
ဘောလုံးပှဲ ကွညျ့ခြိနျမှာ၊ အားလုံးက အမြားဆုံး သုံးကွတာကလညျး geili ပါပဲ၊ ဥပမာ " ဂြာမဏီက ကောငျးလိုကျတာကှာ " ၊ " ဒီဘောပှဲက မကောငျးပါဘူးကှာ " စသညျဖွငျ့ပေါ့။
သငျလညျး geili ကို စမျးသုံးကွညျ့ပေါ့၊ သငျ့ရဲ့ တရုတျစာ အရမျး ကောငျးတာပဲလို့ တခွားလူတှကေ ထငျသှားလိမျ့မယျနျော။
3. 太...了 〔tài...le〕... လှနျးတယျ။ အရမျး
4. 好 〔hǎo〕 ကောငျးသော
5. 你 〔nǐ〕မငျး။ နငျ။ ခငျဗြား။ သငျ
7. 厉害 〔lìhài〕 တျောသော
8. 除了 〔chúle〕... မှလှဲ၍
9. 用 〔yòng〕အသုံးပွုသညျ
10. 我们 〔wǒmen〕ငါတို့။ ကြှနျတျောတို့
11. 还 〔hái〕... သေးသညျ
12. 可以 〔kěyǐ〕... လို့ရသညျ။ နိုငျသညျ
13. 给力 〔gěilì〕အလှနျကောငျးသော
14. 来 〔lái〕လာသညျ။ ... မယျ
15. 表达 〔biǎodá〕 ဖျောပွသညျ
16. 一样 〔yíyàng〕တူညီသော
17. 的 〔de〕ရဲ့။ ၏။ သော
18. 意思 〔yìsī〕အဓိပ်ပာယျ
19. 所以 〔suǒyǐ〕ဒါကွောငျ့မို့
20. 说 〔shuō〕 ပွောသညျ
21. 是 〔shì〕ဟုတျသညျ။ ဖွဈသညျ
22. 有 〔yǒu〕မှာရှိသညျ
23. 帮助 〔bāngzhù〕ကူညီသညျ
24. 给面子 〔gěi miànzi〕မကျြနှာရသညျ
25. 那 〔nà〕ဒါဆိုရငျ
26. 没有 〔méiyǒu〕မရှိပါ
27. 不 〔bù〕မ ( အငွငျး )
28. 就 〔jiù〕စကားဆကျ
29. 啦 〔la〕ဝါကနြောကျဆကျပုဒျ
30. 原来 〔yuánlái〕မူလဖွဈသော
31. 北方 〔běifāng〕 မွောကျပိုငျး
32. 一些 〔yìxiē〕တခြို့သော
33. 地方 〔dìfāng〕 နရော။ ဒသေ
34. 方言 〔fāngyán〕 ဒသေန်တရစကား
35. 后来 〔hòulái〕 နောကျတော့
36. 在 〔zài〕မှာ။ မှာရှိသညျ
37. 网络 〔wǎngluò〕အငျတာနကျ
38. 上 〔shàng〕အပျေါ
39. 流行 〔liúxíng〕 ရပေနျးစားသညျ
40. 起来 〔qǐlái〕( ဖွဈ ) လာသညျ
42. 出现 〔chūxiàn〕 ပျေါထှကျလာသညျ
43. 了 〔le〕... ပွီးပွီ။ ခဲ့တယျ
44. 词典 〔cídiǎn〕အဘိဓာနျ
45. 里 〔lǐ〕အထဲ။ အတှငျး
46. 很多 〔hěnduō〕အမြားကွီး
47. 工作 〔gōngzuò〕အလုပျ
48. 老板 〔lǎobǎn〕သူဌေး
49. 每个月 〔měige yuè〕လတိုငျး
50. 都 〔dōu〕အားလုံး
51. 给 〔gěi〕 ပေးသညျ
52. 发奖金 〔fā jiǎngjīn〕 ဘောနပျဈပေးသညျ
53. 生活 〔shēnghuó〕လူနမှေုဘဝ
54. 中 〔zhōng〕အလယျ။ အထဲ
55. 网速 〔wǎngsù〕အငျတာနကျ မွနျနှုနျး
56. 太 〔tài〕အရမျး။ သိပျ
57. 看 〔kàn〕ကွညျ့သညျ
58. 电视剧 〔diànshìjù〕ရုပျရှငျဇာတျလမျးတှဲ
59. 老 〔lǎo〕... ခညျြးပဲ
60. 卡 〔kǎ〕ရပျတနျ့သညျ။ နှေးကှေးသော
61. 球赛 〔qiúsài〕 ဘျောလုံးပှဲ
63. 大家 〔dàjiā〕အားလုံး
65. 最多 〔zuìduō〕အမြားဆုံး
66. 也 〔yě〕လညျး။ လညျးပဲ
68. 德国 〔Déguó〕ဂြာမဏီ
69. 这场 〔zhè chǎng〕ဒီတဈပှဲ
70. 球 〔qiú〕 ဘျောလုံး
71. 啊 〔a〕ဝါကနြောကျဆကျပုဒျ
72. 等等 〔děng deng〕စသညျဖွငျ့
73. 试 〔shì〕စမျးသပျသညျ
74. 吧 〔ba〕ဝါကနြောကျဆကျပုဒျ
75. 别人 〔biérén〕တခွားသူ
76. 会 〔huì〕တတျသညျ။ လိမျ့မယျ
77. 觉得 〔juéde〕ခံစားရသညျ
78. 中文 〔Zhōngwén〕တရုတျဘာသာ
79. 很 〔hěn〕အရမျး
80. 哦 〔o〕ဝါကနြောကျဆကျပုဒျ
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(94) 两
4:10 PM C-Draw , Chinese
“နှစ်” ဂဏန်းကို တရုတ်လို 两 လို့လည်း ခေါ်နိုင်ပါသေးတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့် မျိုးပြစကားလုံးများ၏ ရှေ့ရှိ “နှစ်” ဂဏန်းကို 两 ဟု အသံထွက်လေ့ရှိပါသည်။
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(93) 木
4:04 PM C-Draw , Chinese
木 ဆိုတာက “သစ်ပင်၊ သစ်သား” ကို ခေါ်တာပါ။ ဒီစာလုံးကလည်း တရုတ်ဘာသာမှာ အသုံးအများဆုံး စာလုံးဖြစ်လို့ အလွတ်ကျက်မှတ်ထားသင့်ပါတယ်။
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(92) 四
3:59 PM C-Draw , Chinese
四 ဆိုတဲ့ “လေး” ဂဏန်းကို တရုတ်တွေက unlucky number အဖြစ် ယူဆထားတဲ့အတွက် မကြိုက်ကြပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ “လေး” အသံထွက်က “သေသည်” စာလုံးနဲ့ အသံထွက် တူနေလို့ပါ။
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(91) 西
3:54 PM C-Draw , Chinese
西 ဆိုတာက မြန်မာလို အနောက်အရပ်ကို ခေါ်တာပါ။ ဒီနေ့မှာတော့ ဒီတရုတ်စာလုံးလေးကို အလွတ်ရအောင် ကျက်ကြပါစို့။
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(90) 东
3:50 PM C-Draw , Chinese
东 ဆိုတာက မြန်မာလို “အရှေ့အရပ်” ကို ခေါ်တာပါ။ ဒီစာလုံးလေးရဲ့ ရေးသားပုံ စုတ်ချက်အဆင့်ဆင့်ကို လေ့လာကြည့်ကြပါစို့နော်။
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(89) 七
3:45 PM C-Draw , Chinese
“ခုနစ်” ဂဏန်းကိုတော့ တရုတ်လို 七 လို့ ခေါ်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ် ဂဏန်း “7” ကို ပြောင်းပြန်လှန်ရေးထားတဲ့ ပုံလေးဆိုတော့ မှတ်လို့ လွယ်မှာပါ။
ခံစားနားဆင် တရုတ်သံစဉ် (84)။
3:29 PM C-Songs , Chinese
ဒီသီချင်းလေးကလည်း သီချင်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ပါ။ သင်လည်း ကြိုက်နှစ်သက်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ နားဆင်ကြည့်ပါအုံး။
သီချင်းအမည် - 冰吻
ခံစားနားဆင် တရုတ်သံစဉ် (83)။
3:21 PM C-Songs , Chinese
“သူငယ်ချင်း” လို့ အမည်ရတဲ့ သီချင်းလေးပါ။ သင့်ရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို သတိရတဲ့အခါတိုင်း အလွမ်းပြေ နားထောင်ဖို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
သီချင်းအမည် - 朋友
ခံစားနားဆင် တရုတ်သံစဉ် (82)။
3:13 PM C-Songs , Chinese
တရုတ်သီချင်းကဏ္ဍကနေ နေ့စဉ် တင်ပေးနေပါတယ်။ ဒီသီချင်းလေးလည်း ကောင်းပါတယ်နော်။ နားဆင်ကြည့်ပါအုံးလို့ တိုက်တွန်းပါရစေ။
သီချင်းအမည် - 水手
ခံစားနားဆင် တရုတ်သံစဉ် (81)။
3:05 PM C-Songs , Chinese
“ရွေးချယ်မှု” လို့ အမည်ရတဲ့ တရုတ်သီချင်းလေးပါ။ မြန်မာသံစဉ်မှာ စုံတွဲဆိုထားတဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ် ဖြစ်ပါတယ်။ နားထောင်လို့ အရမ်း ကောင်းပါတယ်။
သီချင်းအမည် - 选择
မြန်မာသံစဉ် - အတူတူဆိုရင် (ဇော်ပိုင် + ချောစုခင်)
ခံစားနားဆင် တရုတ်သံစဉ် (80)။
2:58 PM C-Songs , Chinese
“လိပ်ပြာလေး နှစ်ကောင်” လို့ အမည်ရတဲ့ တရုတ်သီချင်းလေးပါ။ အေးအေးလေးနဲ့ နားထောင်လို့ ကောင်းပါတယ်။ စာသားလေးတွေကလည်း နူးညံ့ပါတယ်။
သီချင်းအမည် - 两只蝴蝶
ခံစားနားဆင် တရုတ်သံစဉ် (79)။
2:51 PM C-Songs , Chinese
ဒီနေ့အတွက် တရုတ်သီချင်းကောင်းလေး တစ်ပုဒ်ကို တင်ပေးလိုက်ပါပြီ။ မြူးမြူးကြွကြွ သံစဉ်လေးနဲ့မို့ နားထောင်လို့ ကောင်းပါတယ်။
သီချင်းအမည် - 浪花一朵朵
မြန်မာသံစဉ် - အမြတ်တနိုး (ထွန်းထွန်း)
ခံစားနားဆင် တရုတ်သံစဉ် (78)။
2:44 PM C-Songs , Chinese
သီချင်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ် တင်ပေးလိုက်ပါပြီ။ တရုတ်သီချင်းကြိုက်တဲ့ ချစ်မိတ်ဆွေများ ခံစားနားဆင်ကြည့်လိုက်ပါအုံးနော်။
သီချင်းအမည် - 梅兰梅兰我爱你
ခံစားနားဆင် တရုတ်သံစဉ် (77)။
2:38 PM C-Songs , Chinese
ဒီသီချင်း နားထောင်ပြီးပြီလား။ ဟောင်ကောင် အဆိုတော်နဲ့ သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ရဲ့ တေးသီချင်းတစ်ပုဒ်ပါ။ ကြိုက်ကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
သီချင်းအမည် - 对面的女孩看过来
ခံစားနားဆင် တရုတ်သံစဉ် (76)။
2:31 PM C-Songs , Chinese
တရုတ်သီချင်း ကောင်းကောင်းလေးတွေကို သင် ကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီလိုသီချင်းလေးတွေကို နားထောင်သင့်ပါတယ်။
သီချင်းအမည် - 天涯
ခံစားနားဆင် တရုတ်သံစဉ် (75)။
3:44 PM C-Songs , Chinese
ဟောင်ကောင်ရဲ့ နာမည်ကြီး အဆိုတော်လည်းဖြစ်၊ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်လည်းဖြစ်တဲ့ သူ့ရဲ့ သီချင်းတွေက အဲယ်လ်ဘမ်တစ်ခုလုံး အလန်းတွေချည်းပါပဲ။ အားပေးလိုက်ပါအုံး။
သီချင်းအမည် - 伤心太平洋
မြန်မာသံစဉ် - အလွမ်းရှင် (ထွန်းထွန်း)
ခံစားနားဆင် တရုတ်သံစဉ် (74)။
3:36 PM C-Songs , Chinese
“အိန္ဒိယ မိန်းမပျို” လို့ အမည်ရတဲ့ သီချင်းလေးကတော့ ၀ူခုံးဇာတ်လမ်းတွဲထဲမှာ အိန္ဒိယကို ရောက်သွားတဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းသီချင်းပါ။ တရုတ်သီချင်းကို ကုလားသံထွက်အောင် ဆိုသွားတာကတော့ တော်ရုံစကေးနဲ့ မရဘူးနော်။
သီချင်းအမည် - 天竺少女
ခံစားနားဆင် တရုတ်သံစဉ် (73)။
3:27 PM C-Songs , Chinese
“ငါ ယုံကြည်တယ်” ဆိုတဲ့ တရုတ်သီချင်းလေးကိုလည်း ခံစားနားဆင်ကြည့်စေဖို့ တင်ပေးလိုက်ပါပြီ။ သူလည်း သီချင်းကောင်းလေး တစ်ပုဒ်ပါပဲ။
သီချင်းအမည် - 我相信
ခံစားနားဆင် တရုတ်သံစဉ် (72)။
ဒီနေ့အတွက် တရုတ်သီချင်းလက်ဆောင်လေးပါ။ သံစဉ်တူ မြန်မာသံစဉ်လေးကလည်း အရမ်း နားထောင်လို့ ကောင်းပါတယ်။
သီချင်းအမည် - 我曾用心爱着你
မြန်မာသံစဉ် - အချစ်ကို သိချိန် (မီးမီးခဲ)
ခံစားနားဆင် တရုတ်သံစဉ် (71)။
3:14 PM C-Songs , Chinese
တရုတ်ပြည်မှာ အရမ်းနာမည်ကျော်တဲ့ သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ပါ။ အရမ်းမြူးတော့ ဒီသီချင်းဖွင့်ပြီး ကလို့တောင် ရတယ်နော်။
သီချင်းအမည် - 小苹果
ခံစားနားဆင် တရုတ်သံစဉ် (70)။
5:46 PM C-Songs , Chinese
ဒီသီချင်းလေးကလည်း မြူးမြူးကြွကြွလေးနဲ့ နားထောင်လို့ အရမ်းကောင်းပါတယ်။ မိတ်ဆွေများလည်း ကြိုက်မှာပါနော်။
သီချင်းအမည် - 隐形的翅膀
မြန်မာသံစဉ် - သိမ်းထားခွင့် (N ကိုင်ရာ)
ခံစားနားဆင် တရုတ်သံစဉ် (69)။
5:06 PM C-Songs , Chinese
တရုတ်သီချင်း ကြိုက်သူများအတွက် သီချင်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ် တင်ပေးလိုက်ပြီနော်။ ဒီသီချင်းကိုလည်း ကြိုက်ကြလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။
သီချင်းအမည် - 特别的爱给特别的你
မြန်မာသံစဉ် - အရင်နေရာ (ရင်ဂို)
ခံစားနားဆင် တရုတ်သံစဉ် (68)။
4:56 PM C-Songs , Chinese
ဒီသီချင်းလေး နားထောင်ဖူးပါသလား။ မြူးကြွတဲ့ သံစဉ်လေးတစ်ပုဒ်ပါ။ အရမ်း ကောင်းလွန်းလို့ နားထောင်စေချင်ပါတယ်။
သီချင်းအမည် - 第一次爱的人
မြန်မာသံစဉ် - ချစ်သောနေ့ (စင်ဒီ + ကြိုးကြာ)
ခံစားနားဆင် တရုတ်သံစဉ် (67)။
4:49 PM C-Songs , Chinese
တရုတ်သီချင်းကောင်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ် တင်ပေးလိုက်ပြီနော်။ အရမ်း နားထောင်လို့ ကောင်းပါတယ်။ ခံစားကြည့်လိုက်ပါအုံးနော်။
သီချင်းအမည် - 挥着翅膀的女孩
မြန်မာသံစဉ် - ကိုယ်ပိုင်တဲ့ ကိုယ့်နေရာ (ရှင်ဖုန်း)
ခံစားနားဆင် တရုတ်သံစဉ် (66)။
4:40 PM C-Songs , Chinese
ဒီတရုတ်သီချင်းကတော့ အေးအေးလေးနဲ့ နားထောင်ကောင်းပါတယ်။ မြန်မာသံစဉ်နဲ့ ဆိုထားတာလည်း ရှိပါတယ်။
သီချင်းအမည် - 绿岛小夜曲
မြန်မာသံစဉ် - လွမ်းဘွယ် (လားရှိုးသိန်းအောင်)
ခံစားနားဆင် တရုတ်သံစဉ် (65)။
5:23 PM C-Songs , Chinese
တရုတ်သီချင်းတွေနဲ့ သံစဉ်တူ မြန်မာသီချင်းတွေထဲမှာ ဒီသီချင်းလေးလည်း အတော့်ကို နားထောင်လို့ ကောင်းပါတယ်။ မိတ်ဆွေများအတွက် မျှဝေပေးထားပါတယ်။
သီချင်းအမည် - 原来你也在这里
မြန်မာသံစဉ် - ကိုယ်မညာတော့ဘူး (N ကိုင်ရာ)
ခံစားနားဆင် တရုတ်သံစဉ် (64)။
5:14 PM C-Songs , Chinese
“အတိတ်က အကြောင်းတွေကို ကန်းပေးလုပ်လိုက်မယ်” ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးပါ။ မြန်မာသံစဉ်ကိုတော့ ကြားဖူးပြီးသား ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
သီချင်းအမည် - 跟往事干杯
မြန်မာသံစဉ် - ဖြေသိမ့်လိုက် (၀ိုင်ဝိုင်း)
ခံစားနားဆင် တရုတ်သံစဉ် (63)။
5:05 PM C-Songs , Chinese
ဒီနေ့အတွက် နားဆင်ရန် တရုတ်သီချင်းလေး တစ်ပုဒ်တင်ပေးထားပါတယ်။ ဒီသီချင်းလေးကလည်း အရမ်းကောင်းပါတယ်။
သီချင်းအမည် - 浪人情歌
မြန်မာသံစဉ် - အချစ်မဲ့ နိဂုံး (၀ိုင်ဝိုင်း)
ခံစားနားဆင် တရုတ်သံစဉ် (62)။
4:50 PM C-Songs , Chinese
တင်ပေးလိုက်ပြီနော်။ ဒီသီချင်းလေးကလည်း သံစဉ်တူ မြန်မာသီချင်း ရှိပါတယ်။ အားလုံးပဲ ကြိုက်ကြလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
သီချင်းအမည် - 单身情歌
မြန်မာသံစဉ် - မခေါ်ရက်ဘူး (၀ိုင်ဝိုင်း)
ခံစားနားဆင် တရုတ်သံစဉ် (61)။
4:38 PM C-Songs , Chinese
ဒီသီချင်းလေးကို သင် နားထောင်ဖူးပါသလား။ နားထောင်ကြည့်လိုက်ပါအုံး။ ဒါလည်း သီချင်းကောင်းလေး တစ်ပုဒ်ပါပဲနော်။
သီချင်းအမည် - 今天你要嫁给我
မြန်မာသံစဉ် - လက်ထပ်စို့နော် (၀ိုင်ဝိုင်း)
ခံစားနားဆင် တရုတ်သံစဉ် (60)။
4:29 PM C-Songs , Chinese
တရုတ်သီချင်း ကောင်းကောင်းလေး တစ်ပုဒ်ပါ။ သံစဉ်တူ မြန်မာသီချင်းလည်း ရှိပါတယ်။ ခံစားနားဆင်ကြည့်ကြပါအုံးနော်။
သီချင်းအမည် - 吻别
ခံစားနားဆင် တရုတ်သံစဉ် (59)။
5:07 PM C-Songs , Chinese
ဒီသီချင်းလေးလည်း လန်းတယ်နော်။ သင် နားထောင်ကြည့်လိုက်ပါ။ လုံးဝ ကြိုက်သွားစေရမယ့် သီချင်းကောင်းလေး တစ်ပုဒ်ပါနော်။
သီချင်းအမည် - 因为爱所以爱
မြန်မာသံစဉ် - ရှင်းပြခွင့်ပေးပါ (R ဇာနည်)
ခံစားနားဆင် တရုတ်သံစဉ် (58)။
4:57 PM C-Songs , Chinese
ဒီသီချင်းလေးကလည်း မြူးမြူးကြွကြွ ဟစ်အော်သီဆိုထားတဲ့ သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ပါ။ မြန်မာသံစဉ်တူ သီချင်းတစ်ပုဒ်ပေါ့။ ခံစားကြည့်လို့ရပါပြီနော်။
သီချင်းအမည် - 她的背影
မြန်မာသံစဉ် - ၀ဋ်ကြွေး (၀ိုင်ဝိုင်း)
ခံစားနားဆင် တရုတ်သံစဉ် (57)။
4:44 PM C-Songs , Chinese
ဒီသီချင်းကို သင် နားထောင်ပြီးပြီလား။ မြန်မာသံစဉ်ရော၊ တရုတ်သံစဉ်ပါ အရမ်း ကောင်းပါတယ်။ ခံစားနားဆင်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
သီချင်းအမည် - 恋曲1990
မြန်မာသံစဉ် - လွမ်းနေအုံးမယ် (၀ိုင်ဝိုင်း)
ခံစားနားဆင် တရုတ်သံစဉ် (56)။
ခံစားနားဆင် တရုတ်သံစဉ် (55)။
ခံစားနားဆင် အင်္ဂလိပ်သံစဉ် (1)။
ခံစားနားဆင် ဂျပန်သံစဉ် (1)။
ခံစားနားဆင် တရုတ်သံစဉ် (54)။
လောကဝတ်အရ အလာပဿလာပ ပြောခြင်း။
မိမိကိုယ်ကို စတင် မိတ်ဆက်ခြင်း။
ဝါကျတို စုစည်းမှု - ၆၄ ။
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(88) 三
ခံစားနားဆင် တရုတ်သံစဉ် (53)။
အရမ်း အသုံးဝင်တဲ့ ဘာသာပြန် အပလီကေးရှင်း။
နာမည်ကတ် အပြန်အလှန် လဲလှယ်ခြင်း။
တရုတ်စာရိုက်ရန် ကီးဘုတ် အပလီကေးရှင်း။
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(87) 二
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(86) 六
ခံစားနားဆင် တရုတ်သံစဉ် (52)။
ခံစားနားဆင် တရုတ်သံစဉ် (51)။
ခံစားနားဆင် တရုတ်သံစဉ် (50)။
ခံစားနားဆင် တရုတ်သံစဉ် (49)။
ခံစားနားဆင် တရုတ်သံစဉ် (48)။
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(85) 五
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(84) 土
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(83) 阳
ခံစားနားဆင် တရုတ်သံစဉ် (47)။
ခံစားနားဆင် တရုတ်သံစဉ် (46)။
ခံစားနားဆင် တရုတ်သံစဉ် (45)။
ခံစားနားဆင် တရုတ်သံစဉ် (44)။
ခံစားနားဆင် တရုတ်သံစဉ် (43)။
ခံစားနားဆင် တရုတ်သံစဉ် (42)။
ခံစားနားဆင် တရုတ်သံစဉ် (41)။
ခံစားနားဆင် တရုတ်သံစဉ် (40)။
ခံစားနားဆင် တရုတ်သံစဉ် (39)။
ခံစားနားဆင် တရုတ်သံစဉ် (38)။
ခံစားနားဆင် တရုတ်သံစဉ် (37)။
ခံစားနားဆင် တရုတ်သံစဉ် (36)။
ခံစားနားဆင် တရုတ်သံစဉ် (35)။
ခံစားနားဆင် တရုတ်သံစဉ် (34)။
ခံစားနားဆင် တရုတ်သံစဉ် (33)။
ခံစားနားဆင် တရုတ်သံစဉ် (32)။
ခံစားနားဆင် တရုတ်သံစဉ် (31)။
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(82) 太
ပဋ္ဌာန်း ၂၄-ပစ္စည်း - 发趣论二十四缘
ခံစားနားဆင် တရုတ်သံစဉ် (30)။
ခံစားနားဆင် တရုတ်သံစဉ် (29)။
ခံစားနားဆင် တရုတ်သံစဉ် (28)။
ခံစားနားဆင် တရုတ်သံစဉ် (27)။
ခံစားနားဆင် တရုတ်သံစဉ် (26)။
ခံစားနားဆင် တရုတ်သံစဉ် (25)။
ခံစားနားဆင် တရုတ်သံစဉ် (24)။
ခံစားနားဆင် တရုတ်သံစဉ် (23)။
ခံစားနားဆင် တရုတ်သံစဉ် (22)။
တရုတ်စကား လေ့လာတာ ကြာပြီလား။
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(81) 丽
အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်လေးတွေရဲ့ အမှတ်တရ ဓာတ်ပုံ။
ခံစားနားဆင် တရုတ်သံစဉ် (21)။